Famakiana Baiboly isan'andro ho an'ny anio 30 Oktobra 2018 | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Drafitra famakiana Baiboly Famakiana Baiboly isan'andro ho an'ny 30 Oktobra 2018
Famakiana Baiboly isan'andro ho an'ny 30 Oktobra 2018
Ny famakiana Baiboly ataontsika isan'andro ho an'ny anio dia avy amin'ny bokin'ny 2 Tantara 22: 10-12 sy 2 Tantara 23: 1-21. Vakio sy ho voatahy.
2 Tantara 22: 10-12:
10 Fa nony hitan'i Atalia, renin'i Ahazia, fa maty ny zanany dia nitsangana izy ka nandringana ny zanak'andriana rehetra tamin'ny taranak'i Joda. 11 Fa Jososa, zanakavavin'ny mpanjaka, dia naka an'i Joasy, zanak'i Ahazia, ka nangalatra azy tamin'ny zanaky ny mpanjaka novonoina, dia nataony tao amin'ny farafara. Ka dia nafenin'i Jehoshabeath, zanakavavin'i Jorama mpanjaka, vadin'i Joiada mpisorona, (fa anabavin'i Ahazia izy), noho izy tsy namono azy. 12 Ary niery tao an-tranon'Andriamanitra tao enin-taona izy; ary Atalia no nanjaka tamin'ny tany.
2 Tantara 23: 1-21:
1 Ary tamin'ny taona fahafito dia natanjaka Joiada, ary naka ny mpifehy zato izy, dia Azaria, zanak'i Jeroham, sy Isimaela, zanak'i Johanan, sy Azaria, zanak'i Obed, ary Mahaseia, zanak'i Adaia, ary Elisafata, zanak'i Zichri , ho amin'ny fanekena aminy. 2 Ary nitety ny Joda izy ireo ka namory ny Levita avy tany amin'ny tanànan'ny Joda rehetra sy ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny Isiraely, dia tonga tany Jerosalema izy. 3 Ary ny fiangonana rehetra nanao fanekena tamin'ny mpanjaka tao an-tranon'Andriamanitra. Ary hoy izy taminy: Indro, ny zanaky ny mpanjaka no hanjaka, araka ny nolazain'ny Tompo ny amin'ny taranak'i Davida. 4 Izao no hataonao; Ny ampahatelony aminareo miditra amin'ny Sabata, dia ny mpisorona sy ny Levita, no ho mpiandry varavarana; 5 ary ny ampahatelony ho ao an-tranon'ny mpanjaka; ary ny ampahatelony dia eo am-bavahadin'ny fanorenenana, ary ny vahoaka rehetra dia ho eo an-kianjan'ny tranon'i Jehovah. 6 Fa aza misy miditra ao an-tranon'i Jehovah afa-tsy ny mpisorona sy ny manompo ny Levita ihany; izy ireo no hiditra, satria masina izy; fa ny vahoaka rehetra kosa dia hiambina ny TOMPO. 7 Ary ny Levita hanodidina ny mpanjaka, samy manana ny fiadiany eny an-tànany; ary na iza na iza miditra ao an-trano, dia hovonoina; fa mitoetra ao amin'ny mpanjaka rahefa miditra izy, na mivoaka. 8 Ary ny Levita sy ny Joda rehetra dia nanao araka izay rehetra nandidian'i Joiada mpisorona, ka samy nitondra ny olom-peheziny izay niditra tamin'ny sabata izy sy ireo izay hivoaka amin'ny Sabata; fa nesorin'i Joiada mpisorona. tsy ireo làlana. 9 Ary natolotr'i Joiada mpisorona ny lefona sy ampinga ary ampinga lehibe, dia an'i Davida mpanjaka izay tao an-tranon'Andriamanitra. 10 Dia nametrahany ny olona rehetra, samy manana ny fiadiany eny an-tanany avy, eo ankavanan'ny trano ka hatrany ankavia amin'ny tempoly, eo akaikin'ny alitara sy ny tempoly, manodidina ny mpanjaka. 11 Dia navoakany ny zanakalahin'ny mpanjaka ka nosatrohany ny satro-boninahitra, dia nomeny ny teni-vavolombelona ary nampanjaka azy. Ary Joiada sy ny zanany nanosotra azy ka nanao hoe: Ho vonjeo ny mpanjaka. 12 Ary nony ren'i Atalia ny feon'ny vahoaka nihazakazaka sy nidera ny mpanjaka, dia nankeo amin'ny olona tao an-tranon'i Jehovah izy. 13 Ary nijery izy, ka, indro, ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny andry teo amin'ny fidirana sy ny andriana sy anjomara nomen'ny mpanjaka; ary ny vahoaka rehetra nifaly sy nampaneno trompetra sy ny mpihira nitondra zava-maneno ary izay nampianatra ny hihira fiderana. Ary Atalia nandriatra ny fitafiany ka nanao hoe: Fikomiana, famadika. 14 Ary Joiada mpisorona nitondra ny mpifehy zato izay mpifehy ny miaramila ka nanao taminy hoe: Ento mivoaka izy, ary izay manaraka azy, hovonoina amin'ny sabatra. Fa hoy ny mpisorona: Aza vonoina izy ao an-tranon'i Jehovah. 15 Ary izy roa lahy nametra-tanana taminy; ary rehefa mby teo am-bavahady ny vavahadin-tsoavaly izy, teo anilan'ny tranon'ny mpanjaka, dia namono azy teo izy. 16 Ary Joiada nanao fanekena teo aminy sy ny vahoaka rehetra, ary teo anelanelan'ny mpanjaka, fa izy ireo ho olon'ny Tompo. 17 Ary ny vahoaka rehetra niditra tao an-tranon'i Bala ka nandrava azy ary nanorotoro ny alitarany sy ny sarin-javatra, dia namono an'i Matana, mpisoron'i Bala, teo alohan'ny alitara. 18 Ary Joiada dia nanendry ny anjara-raharahan'ny tranon'i Jehovah tamin'ny tanan'ny Levita mpisorona, izay efa nozarain'i Davida tao an-tranon'i Jehovah hanatitra ny fanatitra dorana ho an'i Jehovah, araka ny voasoratra ao amin'ny lalàn'i Mosesy , tamin'ny fifaliana sy ny fihirana, araka ny nanendren'i Davida azy. 19 Ary napetrany teo am-bavahadin'ny tranon'i Jehovah ny mpiandry varavarana, mba tsy hidiran'ny olona maloto amin'ny zavatra rehetra. 20 Ary naka ny mpifehy zato sy ny manan-kaja sy ny governora amin'ny vahoaka ary ny olona rehetra izy, dia nampidina ny mpanjaka avy tao an-tranon'i Jehovah, ka dia niditra tamin'ny vavahady avo ho ao amin'ny mpanjaka izy ireo. trano ary apetraho eo amin'ny seza fiandrianan'ny fanjakana ny mpanjaka.
Previous lahatsoratra20 Ireo teboka amin'ny vavaka manafaka
Next lahatsoratraFamakiana Baiboly isan'andro ho an'ny 31 Oktobra 2018
50 Vavaka Famelomana ho amin'ny fanasitranana Hypertension
Vavaka hanoherana ny tsy fahombiazana eo amin'ny faran'ny fianianana
Vavaka hanoherana ny lehilahy matanjaka ao amin'ny fianakaviana
30 Vavaka hahazoana fiarovana sy fitarihana amin'ny fiainako